'ကျောင်းသားများသည် N စကားလုံးနှင့်အတူအရက်သောက်ကစားခြင်း' - DURHAM မှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ်ကျောင်းသားများ - သတင်း
'ကျောင်းသားများသည် N စကားလုံးနှင့်အတူအရက်သောက်ကစားခြင်း' - Durham မှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ်ကျောင်းသားများ
Durham တက္ကသိုလ်မှာနှစ်ပတ်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုအိမ်ကနေခေါ်ပြီးကျွန်တော်မျက်ရည်တွေအော်ခဲ့ရတယ်။ ဤနေရာတွင်မခံမရပ်နိုင်အောင်ကင်းကွာနေပြီးမသက်မသာဖြစ်သည်။ အိမ်ပြန်ချင်တယ် ကျောင်းကထွက်ခွာသလိုခံစားရတယ် သူနှင့်ဖုန်းပြောချိန်နှစ်မိနစ်သာရှိပါကကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှစိတ်ဆင်းရဲရသည်ကိုသူချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ် Durham ရှိသူငယ်ချင်းမဟုတ်သောသူငယ်ချင်းများကိုရှင်းပြသောအခါ၊ သူတို့တစ်ယောက်မှအမှန်တကယ်နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ တကယ်တော့သူတို့ထဲကတချို့ဟာအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။
သူတို့ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် Durham မကြိုက်ကြတာလဲ မတူကွဲပြားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများရှိသည့်လှပသောမြို့၊ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအများစုအတွက်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးအရာသည်တောင်များအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ့မှာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိတယ်။ ဒါကြောင့်တောင်ကုန်းကခိုင်မာတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Durham မှာဖြစ်ရတာအပင်ပန်းဆုံးအရာကတော့လူမည်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းပဲ။
ဂျော့ခ်ျ Floyd ကိုမတရားသတ်ဖြတ်မှုအပြီး Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှလူအများအပြားသည်ငါနှင့်အခြားသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ထားသောအရင်းအမြစ်များနှင့်အသနားခံချက်များကိုဝေမျှကြသည်။ လူတွေကိုစကားပြောပြီးနောက်၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုလား၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဘယ်လိုတက်တက်ကြွကြွရှိသင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မကိုနားလည်မှုလွဲစေဖို့ကတိပေးထားတဲ့လူတွေအပေါ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ရင်၊ တစ်ခုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာတယ်။ Durham လူမည်းတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာဘယ်လောက်အထိပျံ့နှံ့နေသလဲ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါစိတ်ကူးတစ်ခုပေးဖို့ကဒီမှာပေါ့။ Durham တက္ကသိုလ်မှကောလိပ်တိုင်းမှလူမည်းကျောင်းသားများအားလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် microaggress များနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ သင်တန်းများနှင့်ကောလိပ်များမှကျောင်းသားများမှ၊ ဒီဟာသည် Durham ၌အနက်ရောင်ဖြစ်ရခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားရသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: Durham သူတို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအားလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုကိုမုန်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိပါ။ နှင့် set up ပါပြီ သတင်းပို့ကိရိယာအသစ် ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များအတွက်သင်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများကြုံတွေ့ရသောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါ၏လူမည်းသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်တွင်လူတို့သည်လူများသည်သူတို့၏ပြတင်းပေါက်များကိုအမြဲတစေစွန့်ခွာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲကြသည်။ လမ်းမှာအခြားတစ်ယောက်မှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ရယ်လွန်းလို့အရမ်းဘုံဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်ဒီလိုမျိုးမျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးဘူး။
လတ်ဆတ်သော '' ကလပ်ထဲမှာအပတ်, ငါမသိသောအဖြူရောင်မိန်းကလေးငါ့ထံသို့လာ။ နှင့်ငါ့ကောက်ကောက်ဆံပင်တို့ထိ '' Wow, ထိုဆံပင်တုလား? '' စဉ်အတွင်း ငါအရမ်းတုန်လှုပ်သွားတယ်, ငါတောင်မှ reply နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အဆင်မပြေပြုံးပြခြင်းနှင့်ပယ်သွားလာ၏။ ဒါဟာငါ microaggression ကြုံတွေ့ချင်ပါတယ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယာဉ်ကြောမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး 'ဆံပင်ညှပ်သမားကမင်းကိုညစ်ပတ်စေတယ်။ '
ငါအဖြူကောင်လေး pres မှာ N ကိုစကားလုံးပြောကြား၏
ကျွန်ုပ်ကောလိပ်တက်နေစဉ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ်လာသည့်အခါယောက်ျားလေးက N စကားလုံးကိုပြောခဲ့သည်။ ငါသူမပြောသင့်တယ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြဖို့အချိန်ယူပေမယ့်ငါအခန်းထဲမှာတစ်ခုတည်းသော POC / ရောနှောပြိုင်ပွဲမိန်းကလေးကြောင့်ငါအလျင်အမြန်ကပယ် brushed ။ ငါတကယ်မသက်မသာခံစားရတယ်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 'မင်းရဲ့အသားအရောင်ကိုငါချစ်တယ်' လို့ငါ့ကို fetishised ကြတဲ့လူဖြူတွေဆီကနေငါ 'ငါတကယ်လူမည်းမိန်းကလေးတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ငါ့အတိတ်မိန်းကလေးတွေဟာအများအားဖြင့်ရောနှောခြင်း / အနက်ရောင်တွေနဲ့ရောနှောနေတယ်' လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်မဆိုပေးထားသော '' မြို့ပြ '' ကလပ်ညမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ '' သင်အဖြူရောင်ဖြစ်လျှင်ငါနှင့်အတူငါရလိမ့်မယ် '' ငါ '' အနက်ရောင်မိန်းကလေးအဘို့အတော်တော်လေး '' ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်
လူမည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အိမ်သို့ပြန်သွားသောအခါသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားအထူးသဖြင့်အမှောင်ထုတွင်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ငါမပြတ်ပျောက်နေသို့မဟုတ်စော်ကားခံရလျှင်ငါ့တရားမျှတမှုများအတွက်လိုက်ရှာအဖြူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတယ်
တစ်ညတည်းခိုပြီးနောက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာကြသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အော်ဟစ်နေတာကိုငါတို့ကြားခဲ့ရတယ်။ သူမအဆင်ပြေမပြဆိုတာကြည့်လိုက်တယ်။ သူမသည် 'f *** ကိုပါကစ္စတန်ကိုပြန်သွား' လို့ပြောပြီးအမည်းရောင်b**** ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။
ငါတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့လူဖြူတွေကသူတို့aည့်သည်ဖြစ်ရင်တောင်နေရာအများကြီးယူတယ်။ အခန်းထဲမှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိနေရင်တောင်ငါနဲ့တခြားအမျိုးသမီးတွေဟာတစ်ယောက်ယောက်ကိုလမ်းမှာရှိနေတဲ့အခါပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုလူဖြူများအတွက်မူယင်းသည်သူတို့အတွက်လုပ်ရန်အလိုလိုမဟုတ်ပါ။ ငါ၏အိမ်သူအိမ်သားများကငါ့အိမ်သို့ဖိတ်ကြားသောအခါ, သူတို့ကမေးသောအခါသူတို့အကြှနျုပျအဘို့နေရာလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသူတို့ကလမ်း၌ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာခဲ့ပါတယ်။ ငါ 'မှားယွင်းစွာ' 'ခဲ့ပြီးတာနဲ့သူနေဆဲငါ့ကိုငါးမိနစ်ငါ့ပစ္စည်းပစ္စယများထုတ်ရဖို့ရုန်းကန်နေတဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့အားဖြင့်နင်းခံရပြီးနောက်သူနေဆဲသတိထားမိခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုရွှေ့ဖို့ယောက်ျားလေးရဲ့ခြေထောက်ဆန့်ကျင်ကက်ဘိနက်တံခါးကိုနှိပ်ပါ။
၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုနောက်ထပ်အနက်ရောင်မိန်းကလေးတစ် ဦး အတွက်မှားယွင်းစွာကောက်ယူခဲ့သည်
Matriculation မှာ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ကဘာမှထူးခြားမှုမရှိပေမယ့်ကောလိပ်မှာရှိတဲ့တစ် ဦး တည်းသောအနက်ရောင်မိန်းကလေးကိုကျွန်မကိုမှားယွင်းစေခဲ့တယ်။ သူမက '' မင်းတို့စာအုပ်ကိုမင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလား '' ဟုသူမမေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးလာသောအခါသူမကကျွန်ုပ်အားထပ်တလဲလဲပြောသော်လည်းသူကကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
ငါ KFC ကငါ့ရဲ့ ID ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကြက်မကုန်သေးဘူးလို့ bouncer တစ်ယောက်ကမေးတယ်
ငါသူ့ကိုသတင်းပို့သည့်အခါကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ဖြေကြားရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာအချိန်ယူခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့် 'ရိုင်းရိုင်းမှု' ကိုစိတ်ထက်သန်စွာတောင်းပန်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်ကကလပ်ထဲမှာဒေသခံတစ် ဦး ငါ့ဆံပင်၌မိမိလက်ကိုထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့် 'honk honk' 'ဟုပြောသည်။ ကျွန်မဆံပင်ကိုမထိဖို့သူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတော့ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကငါအရမ်းတုံ့ပြန်တာနဲ့တူတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းဖက်ရှင်ပြပွဲတွင်ကျွန်ုပ်၏အဖြူရောင်အသွင်ဖြင့်ရောနှောထားသောပြိုင်ပွဲဝင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူမအားရှစ်လေးလုံးစကားလုံးဖြင့်စကားပြောခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်။ 'Yo peng ting' ဟုပြောလိုက်သည်။ ' သူပြောနေတာကိုကျွန်တော်အတော်မသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပြောပြခဲ့တယ်။ သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်ရန်လိုသောစကားကိုဖြစ်လာခဲ့သည်: 'ငါကလူသင်တို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်' '။ ' သင်ကလူ? 'ငါတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူ့သူငယ်ချင်းကသူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရပ်သွားသည်။
လူဖြူတွေက N စကားလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးသီဆိုနေတာကိုး
ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော့်အခန်းထဲပြောင်းရွှေ့လာရင်းကျွန်တော့်အမေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမကမြက်ခင်းတစ်လျှောက်ထောက်ပြပြီး 'အိုးနက်အနက်ရောင်မိန်းကလေးကိုကြည့်ပါ' လို့ပြောလိုက်တယ်။ နာရီဝက်အကြာမှာကျွန်တော့်ရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလူမည်း ၃ ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပါဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ အနည်းဆုံးပြောရန်ခက်ခဲသည်။ လူအများစုကကျွန်ုပ်နှင့်တူသောနေရာတွင်ကြီးပြင်းလာခြင်း၊ Durham ကိုသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့ပြကလပ်ညကိုသွားပြီးအဲဒီမှာရပ်ပြီးလူဖြူတွေရဲ့ပင်လယ်နားကိုအဆုံးမှာခက်ခဲတဲ့အသံနဲ့အော်ဟစ်ပြီးပြောမပြနိုင်လောက်အောင်အဆင်မပြေမှုတွေခံစားနေရတယ်။
ငါအတိတ်ကားမောင်းလူနှစ် ဦး တွေ့ဆုံ, ငါ့ကိုမြင်လျှင်နှေးကွေး သူတို့ကသူတို့ပြတင်းပေါက်ကနေလှိမ့်ပြီးကျွန်တော့်အာရုံကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုလူမျိုးရေးစကားတွေကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းဖွင့်လှစ်သောနေ့သံအမတ်အနေဖြင့်မိဘများစွာက 'ငါဘယ်ကလာတာလဲ' ဟုမေးခဲ့သည်။
သူတို့၏ကားများမှလူတစ်စုကကျွန်ုပ်ကို 'wagwarn mi friend' ဟုကြွေးကြော်သည်
ငါညအချိန်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းသို့ပြန်လာစဉ်ကျွန်ုပ်မသိသောအဖြူကျောင်းသားများ၏ကားသည်ပြတင်းပေါက်သို့လှိမ့်လိုက်ပြီးဂိုဏ်းဂဏသင်္ကေတများကိုလွှင့ ်၍ 'wagwarn mi friend' ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ အခုတော့အနီရောင်ကားတစ်စီးဖြတ်သွားတိုင်းငါမသက်မသာခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Durham ငါးနှင့်ချစ်ပ်ဆိုင်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်
လူဖြူများစွာသည်ပြnoနာမရှိသော်ငြားလည်းငါးနှင့်ချစ်ပ်ဆိုင်တွင် ၀ န်ထမ်းများကကျွန်ုပ်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းဝင်းကဒ်ပြားကိုပြသရန်တောင်းဆိုခံရသည်။ သင်ကကျောင်းဝင်းကဒ်ဖြင့်သာသင်ရနိုင်သည့်ထမင်းဘူးလက်မှတ်ရပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ခါကငါနေ့လည်စာစားနေတုန်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအခြားအိတ်ကပ်ထဲရွှေ့လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်ကို N စကားလုံးလို့ခေါ်ပြီးအဖြူကျောင်းသားတွေဟာအာဖရိကသားတွေကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကြည့်တယ်
လတ်ဆတ်သောရက်သတ္တပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကောလိပ်မှမောင်းနှင်နေသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ် N ကိုစကားလုံးဟုခေါ်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲအဖြူရောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအာဖရိကကိုသူဘယ်လိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြတယ် (မာလာဝီကိုသူမသွားခဲ့တယ်)၊ အာဖရိကတိုက်တစ်ခုလုံး၊ အာဖရိကတိုက်သားအားလုံးကဂျုံယာကိုစားတယ်။
ငါအဖြူကျောင်းသားများနှင့်အတူ blackface ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံရန်ရှိသည်
ငါ Durfess အပေါ် blackface နှင့်ပတ်သက်။ အငြင်းအခုံခဲ့ဘာကြောင့်မှားရဲ့။ အချို့သောဘောလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှယောက်ျားများသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်ဝတ်ဆင်ရန်၊ ဆံပင်ကိုဆံပင်ရိတ်ခြင်း၊ အာဖရိကတိုက်၏ဆံပင်များဖြင့်ဝတ်ဆင်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ Durfess ရှိလူကသူတို့၏ 'အပြစ်မဲ့သောရည်ရွယ်ချက်များ' သည်နာကြည်းဖွယ်သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံမျိုးဆက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်လုံလောက်သည်ဟုခံစားမိသည်။
ငါ Blackfishing နှင့် Ariana Grande အပေါ်အငြင်းပွားမှုများရှိခဲ့ပါတယ်
ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားသည်ထင်ပေမယ့်ကျိန်းသေ blackfishing င်သော Ariana Grande ရဲ့ပြproblemနာ tanning, အကြောင်းကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ရသည်။ ငါ့ကောလိပ်မှာရှိတဲ့ဒီမိန်းကလေးကအရမ်းကိုစိတ်ပျက်အားငယ်သွားတယ်။
North Road မှလမ်းလျှောက်နေစဉ်ယောက်ျားလေးများသည် 'သင်သည်အာဖရိကမှဖြစ်သလော' နှင့် 'သင်မိုးရွာဖူးလား၊
လူများသည်ကျွန်ုပ်၏ရုန်းကန်မှုကို Durham ရှိအနက်ရောင်ကျောင်းသားတစ် ဦး အဖြစ်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားဖြစ်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ကြိုးစားသည်
ငါသည်အခြားဆရာသို့ပြောင်းရွှေ့အကြောင်းငါ့ဆရာနှင့်စကားပြောသောအခါသူမသည်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုမြောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါလူမည်းဗြိတိသျှနဲ့မွတ်စလင်ပါ။ ငါကုထုံးကနေအလားတူနှိုင်းယှဉ်တယ်။ ငါယခုအခြားတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပါပြီ
ကျွန်ုပ်၏ uni ဟောင်း၌ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားအနက်ရောင်ကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသောကျွန်ုပ်တို့၏ကထိကများကထောက်ပံ့ပေးသော decolonising academia group ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ကထိကကအဖြူနဲ့အရမ်းလေးစားပြီးသူမလိုအပ်တာတွေအများကြီးကူညီပေးနိုင်မယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီမှာသူမကိုမလိုချင်ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုလူမည်းကျောင်းသားများဖြစ်ရန်ပြောဆိုပြီးတက္ကသိုလ်တိုးတက်မှုအတွက်တက္ကသိုလ်မှအသုံးပြုမည့်အကြံဥာဏ်များကိုပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအားပေးခဲ့သည်။
သို့သော် Durham တွင်ကျွန်ုပ်၏ seminar များ၌တင်းမာမှုခံစားခဲ့ရပြီးကိုလိုနီဝါဒသို့မဟုတ်လူမှုဆက်ဆံရေးများအကြောင်းပြောဆိုသောအခါတိုင်း။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကတရုတ်ကပါ၊ သူလည်းထပ်တူခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းအုပ်စုဖွဲ့စကားပြောခန်းတွင်လူတစ် ဦး ကကူးစက်ရောဂါသည်လူများ၏အမှတ်အသားများကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုသူတို့နားမလည်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါကဆရာကငါ့ကိုလျစ်လျူရှုပြီးကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေပြောင်းရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကငါ့ကိုအကူအညီမပေးခဲ့ဘူး၊ ငါစာတမ်းတစ်စောင်တင်ချင်တဲ့လူမှုရေးပြsuperနာတွေကိုလုံးဝပယ်ချလိုက်တာပဲ။ အစည်းအဝေးမတိုင်မီတွင်ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်သို့အချည်းနှီးသွားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (Durham ရှိကျွန်ုပ်၏မိသားစုအိမ်တွင်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သည်) ။ ငါသည်လည်းကောင်းစွာဆိုလိုပေမယ့်မှားယွင်းစွာငါကိုလိုနီစနစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကြောင့်ဟုမပြောနိုင်သူတစ် ဦး ကထိကရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြူကောင်လေးတစ်ယောက်လာခေါ်လာတယ်။ 'မင်းကလူဖြူတွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားနေတာလား။ သငျသညျ '' အလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုတကယ် freaked ။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်အတွေ့အကြုံအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတက္ကသိုလ်မှာညဥ့်နက်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါနဲ့အနက်ရောင်မိန်းကလေးသုံးယောက်ဟာတက္ကစီရာထူးကိုတက်ခဲ့ကြပေမယ့်ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်သွားဘူး။ အဖြူရောင်ကျောင်းသားများရောက်ရှိလာချိန်တွင်ကားမောင်းသူများကသူတို့ကိုခေါ်သွားကြသည်
ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှလာခွင့်မပြုတာကြာပြီ။ ငါတို့လုပ်ခဲ့တုန်းကလူဖြူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲ R. စကားနဲ့အိမ်ပြန်ပါ 'လို့ပြောခဲ့တယ်
ကျောင်းသားများသည်အရက်သောက်သည့်ဂိမ်းများကိုကစားကြပြီးလူမည်းကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်း N ဟူသောစကားလုံးကိုပြောကြသည်
ကျွန်ုပ်၏ကောလိပ်ရှိအဖြူရောင်ကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုသည်လူမည်းတစ် ဦး ကိုတွေ့သည့်အခါ N စကားလုံးနှင့်သူတို့သောက်နေသောသောက်စရာများကစားသည့်ဂိမ်းရှိသည်။ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်
ဤရွေ့ကားများစွာသော microaggressions နှင့်လူမည်းလူမျိုး Durham မှာရင်ဆိုင်ရသောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်စဉ်များအနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါသည်လည်းသူတို့ထဲကအတော်များများကြုံတွေ့ကြပြီပြောစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ လူအများက 'ဘာလို့မင်းတစ်ယောက်ယောက်ကိုမပြောတာလဲ' ဟုမေးကြသည်။ သို့သော်အဘယ်အရာကိုသူတို့အသိအမှတ်မပြုရန်ပျက်ကွက်သောဤဖြစ်စဉ်များနှင့်အများအပြား (အခြားသူများကိုသင် Durham ရဲ့တရားဝင် Podcast တခုကို Podcast တခုကိုအပေါ်: ဒီအပတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ယခုအပတ်နှောင်းပိုင်းတွင်အပေါ်ကြားနိုင်သည့်) ၏များစွာသောပုံမှန်လျစ်လျူရှုနှင့်ပယ်ချနေကြသည်။ POC ကျောင်းသားများသည်ဤပြissuesနာများကို Durham People of Colour Association (DPOCA) နှင့် Afro Caribbean Society (ACS) ကဲ့သို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်၊ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိကြသည်။ သို့သော်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အခြားသူများကိုလွှဲအပ်ရန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံး၏အခန်းကဏ္ and နှင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ လူမည်းကျောင်းသားများ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသော်လည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည် POC အားလုံးအတွက်အထူးသဖြင့် Durham ၌ရှိကြောင်းမှတ်မိရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
Durham သည် uni အတွင်းရှိလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်များအားတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးအားဖြေကြားခဲ့သည်။ ဒုတိယ VC ကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် - ဤတွင် Durham တက္ကသိုလ်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ရွာလူထုအားလုံး၏လုံခြုံမှု၊ လေးစားမှုနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ။ ဒါကိုလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်: ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအားလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးရာဇဝတ်မှုများကိုမုန်းတီးသည်။ ဤနေရာတွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုပCharterိညာဉ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးသောအခါ BAME ကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏တားဆီးပိတ်ပင်မှုကိုခံရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ BAME ကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်စားပြုမှု၊ တိုးတက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ယခုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ရပ်ရွာ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာရရှိနိုင်ပါသည် www.durham.ac.uk/equality.diversity/rec
ကျောင်းသားများ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့် visitors ည့်သည်များသည်မလိုလားအပ်သောအပြုအမူများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုရယူနိုင်သည့်အွန်လိုင်းအစီရင်ခံစာနှင့်အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဒီမှာရနိုင်သည် reportandsupport.durham.ac.uk ။ သင်၏အသိအမြင်မြှင့်တင်ရေးအတွက်သင်၏ပံ့ပိုးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ရွယ်တူချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မျှဝေပါ
ဤနေရာတွင်လူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဤနေရာတွင်လေ့လာခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုဖန်တီးရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးစားမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏ကော်မရှင်၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုမကြာမီထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ ကော်မရှင်၏ထောက်ခံချက်များအားလုံးကိုတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကထောက်ခံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုမကြာမီကြေငြာမည်။
ဒါ့အပြင်တွစ်တာမှာတင်ထားတဲ့ Durham တက္ကသိုလ်ကလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတဲ့ကျောင်းသားကိုပြသတဲ့ဗွီဒီယိုတခုကိုသင်မြင်ဖူးတယ်၊ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စကိုအရေးတကြီးကိစ္စအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့်၎င်းတို့အားအပြတ်အသတ်ဆုံးသောပြစ်ဒဏ်များဖြင့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်။ ဗီဒီယိုရိုက်ခတ်ခံရသည့်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းရှိမည်သူမဆိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ပံ့ပိုးမှုမှတဆင့်အကူအညီရယူနိုင်သည်။
Aprilပြီလ ၂၁ ရက်တွင် Durham ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကPresident္ဌနှင့် JCR ဥက္ကCommittee္ဌများကော်မတီဥက္ကChair္ဌနှင့်ဒု - အဓိပတိ (ကောလိပ်များနှင့်ကျောင်းသားအတွေ့အကြုံ) တို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းကျင့် ၀ တ်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုဤinရိယာ၌ပေးခဲ့သည်။ ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်ဆံစေချင်သလိုသူတစ်ပါးကိုဆက်ဆံပါ။ ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းကိုဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုအထူးသတိထားမိစေချင်ပါတယ်။
အခြေအနေများပြောင်းလဲနေသော်လည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်မုန်းတီးမှုကိုကျူးလွန်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းတို့ကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီကို ဦး တည်သောစိတ်စွန်းကွက်မှုများ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့်အမုန်းတရားများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်လူအများနှင့်ရပ်ရွာလူထုများအားကွဲပြားသောနည်းများဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူနှင့်အခွင့်အရေးများသည်အခြားသူများအပေါ်မည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းဖြင့်သာလူတိုင်းကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလေးစားစွာဆက်ဆံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ တန်းတူညီမျှမှု၊ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်အားလုံးပါ ၀ င်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ ။
နောက်ဆုံးတွင်အနက်ရောင်ကျောင်းသားများသည်ကျောင်းသားလူ ဦး ရေ၏ ၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်ကိုအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ လူမည်းအသိုင်းအဝိုင်းမှခံစားခဲ့ရသည့်ကင်းကွာနေမှုနှင့်အခြားအရာများသည်အဖြူရောင်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်တက်ရောက်လာသောအနက်ရောင်ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်အလားအလာရှိသောကျောင်းသားများကပြင်းထန်စွာခံစားရသည်။ လာမည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းနောက်ထပ်လူမည်းကျောင်းသား ၁၀၀ ကိုရရှိရန် Durham ၏ရည်မှန်းချက်မှာယခုအချိန်တွင်အလွန်အမင်းမယုံနိုင်စရာဖြစ်ရုံသာမကစော်ကားမှုလည်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အားဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ခွဲတမ်းမဟုတ်ပါ အရောင်အသွေးစုံလင်သောကျောင်းသားများသည်အမှန်တကယ်စိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရန်၊ သူတို့အတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်နှင့်တက်ကြွသောလူမျိုးရေးဆန့်ကျင်ရေးကို ဦး တည်သည့်အလုပ်မလုပ်မှသာလျှင်တက္ကသိုလ်ကိုမနှစ်သက်ပါ။
Michael Jackson ပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ကျန်တယ်
Durham တက္ကသိုလ်ကပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ ငါမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များ၏အလငျး၌, နောက်ဆုံးတော့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်
အမည်များ၊ သင်တန်းများနှင့်တစ်နှစ်တာအုပ်စုများသည်ကျောင်းသားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်ဤဆောင်းပါး၌မပါ ၀ င်ပါ။ Tab Durham မှဤစာမူမှသက်သေခံချက်များပါရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်တိုင်းDurham တက္ကသိုလ်မှကောလိပ်။
သငျသညျ Mirabelle Otuoze ဒီစနေနေ့ထွက်လာသော '' Durham တက္ကသိုလ်ကအနက်ရောင်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်း '' အထူး Podcast တခုကိုအတွက်သူမဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအချို့ကိုဖတ်ကြားစကားကိုသင်တို့ကြားနိုင်ပါတယ်။ Durham တက္ကသိုလ်မှ POC ကျောင်းသားများ၏အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုနားထောင်ရန် Spotify on Demand on Purple Radio နှင့် Apple Podcasts များကိုရှာဖွေပါ။